ဇင်လင်း – ဘာကို ပြောင်းရမှန်း မသိသူ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇင်လင်း – ဘာကို ပြောင်းရမှန်း မသိသူ
Kachin Refugees – file photo
( မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၅
• ဘာကို ပြောင်းရမှာလဲတဲ့……
အလုပ်တွေ ဖန်တီးပေးဖို့ လုပ်ပေးရမှာပေါ့…..
အလုပ်ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူဟာ… ခင်ဗျား ဖြစ်နေရင်…
ဟုတ်ကဲ့… ဖန်တီးပေးနိုင်သူကို နေရာပေးလိုက်ပါ…..
အဲဒါ…ပြောင်းရမယ့်… ကိစ္စ ဖြစ်နေလို့ပါ။
• ဘာကို ပြောင်းလဲရမှာလဲတဲ့……
လူတွေ…မကျန်းမာ…ဆေးကုစရာ ငွေလည်းမရှိ…အခွင့်အရေးလည်း မရှိ…ဖြစ်နေရင်
ဟုတ်ကဲ့….ခင်ဗျား မဖန်ဆင်းနိုင်ရင်…ဖန်ဆင်းတတ်သူကို နေရာပေးလိုက်ပါ….
လူတွေ….နေစရာမရှိ….လမ်းဘေးမှာ နေ…လမ်းဘေးမှာ စား…လမ်းဘေးမှာ အိပ်..
ဗျာ….. ဖန်တီးပေးဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူး…..ဟုတ်လား……
သူတို့ဘ၀မှာ….ကျောင်းဆိုတာ မရှိ…. ပညာဆိုတာ မသိ….ဆင်းရဲလွန်းစွ….
ဗျာ…အဲဒါ…. ကံပဲပေါ့လို့ ပြောမှာလား……
သူတို့ကလေးတွေ ကျောင်းတက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးမှာလား….
သူတို့ကိစ္စ….ကူညီ စောင့်ရှောက်နိုင်သူတွေကို တာဝန်လွှဲပေးပေါ့…..
ဟုတ်ကဲ့…သူတို့သာ ပညာမတတ်ခဲ့ရင်…တစ်နေ့မှာ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ကြလိမ့်မယ်……
ဒါကြောင့်… ကလေးတွေကို ပျိုးထောင်ပေးမယ့်သူတွေကို နေရာပေးပါ…
ချမ်းသာပြီးရင်း…ချမ်းသာ….လယ်သမားတွေ ခမြာတော့….ဆန္ဒပြရုံ ပဲပေါ့…
ဗျာ ဘယ်လို….ဆူဆူပူပူ မလုပ်စေချင်ဘူး တဲ့လား…..
အော် မပေးချင်ကြဘူး ဆိုပါတော့……
ပြောင်းလဲချိန်တန်လို့ ပြောင်းရမယ့်…ကိစ္စ သူတို့လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ရိုးသားတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေ…ရေရေရာရာ မရှိ…..
မရိုးသားတဲ့ အစိုးရလုပ်စားသူတွေမှာတော့….အကာအကွယ်တွေ အပြည့်…..
တိုင်းပြည့်သယံဇာတ ကာကွယ်သူတွေ အဖမ်းခံရ…….
ဗျာ……ခရိုနီ ခရိုပြာ ခရိုစိမ်း….တွေ…..ကို အရေးမယူနိုင်ဘူးပေါ့…
ဒါဆိုလည်း…. အရေးယူပေးမယ့်…လူထု အစေခံ အစိုးရကို..နေရာပေးဖို့လိုပါပြီ….
ပြောင်းလဲချိန်တန်လို့ ပြောင်းရမယ့်…ကိစ္စ၊ လူထုအစိုးရ လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
ပြောင်းပြီးပြီ ဆိုပါလား….. အတော် တရားကျဖို့ကောင်းလေစွ…….
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကျွန်သာသာ ဘ၀နဲ့…လူ့သိက္ခာတွေ ရောင်းစားနေရဆဲ…….
ခင်ဗျားတို့မှာက ထားစရာမရှိ….လူထုမှာက စားစရာမရှိ…….
အဲဒါကို ပြောင်းပြီးသားလို့ ထင်ရင်….တစ်ခုခု… မှားနေပြီလို့ မြင်ကြလိမ့်မယ်….
မသိ မတတ်သူတွေ…လူထုဘ၀ မစာနာသူတွေ…အနားယူချိန် တန်ပြီပေါ့။
• ပြောင်းချိန်တန်လို့…ပြောင်းလဲတာ … သိက္ခာရှိစွာ..လက်ခံလိုက်ပါတော့။။။။။
၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅၊ တနင်္ဂနွေနေ့။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ, ဇင်လင်း